एडोब प्रोटो: तपाईंको ट्याब्लेटमा प्रोटोटाइप टच गर्नुहोस् Martech Zone
एडोब प्रोटो: तपाईंको ट्याब्लेटमा टच प्रोटोटाइप
मंगलवार, नोभेम्बर 22, 2011 Douglas Karr
एडोबले एक सूट सुरू गर्‍यो एन्ड्रोइडसँग मिल्दो अनुप्रयोगहरू छुनुहोस् ट्याब्लेट यो ठूलो छ कि फोटोशप, डेबुट, विचार र कुलेर ट्याब्लेटमा आफ्नो बाटो बनाउँदै छन् र टच इन्टरफेसको लागि अनुकूलित छन्, तर म निश्चित छु कि म उनीहरूको माझमा साँच्चिकै औंलाले औंला फ्याँक्न सक्छु र वास्तवमै धेरै उत्पादक पनि हुँ। फोटोशपमा)।
एउटा अनुप्रयोग, सँग मिसाइएको एडोब रचनात्मक क्लाउड त्यो वास्तवमै मेरो सामु उभिएको थियो एडोब प्रोटो। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस लेआउटलाई फ्याट गर्नको लागि क्षमता अविश्वसनीय छ। हामी प्रयोग गर्छौ LucidCharts अहिले र सहयोग क्षमताहरू मनपर्दछ। जे होस्, प्रोटो एक अद्भुत अनुप्रयोग हो ... विशेष गरी १० डलरको लागि।
म Adobe Proto आईप्याडमा बनाएको हेर्नको लागि हेर्दै छु!
टैग: एडोब रचनात्मक बादलएडोब प्रोटोट्याब्लेट
फेब्रुअरी १,, २०११ 4:१:2012 अपराह्न
भयानक मार्केटिंग र उत्पादन! तपाईंले उनीहरूको क्लाउड सेवा प्रयोग गर्नुपर्नेछ $ १ use / / महिना एक पीसीमा फाईलहरू साझेदारी गर्न सक्षम हुन, तपाईं आफ्नो ट्याब्लेटमा फाइल बचत गर्न सक्नुहुन्न र sdcard वा usbdrive प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, वा ईमेल गर्नुहोस्।
त्यहाँ अन्य धेरै नि: शुल्क विकल्पहरू छन् जुन तपाईंलाई समान चीज गर्न निःशुल्क र ट्रान्सफर फाइलहरू नि: शुल्क गर्न दिन्छ।
मैले एडोबसँग धेरै अवसरहरू भनें, उनीहरूका स्टाफहरू पनि चालै नपाई तिनीहरूसँग एन्ड्रोइड टोली छ, तर उनीहरूले धेरै जान्दैनन्, न पूर्व बिक्री, वा टेक समर्थन। अन्तत: १ हप्ता पछि मैले ईमेल पाएँ कि उनीहरूको महँगो क्लाउड सेवा बाहिर फाईलहरू साझेदारी गर्न असम्भव थियो।
त्यसो भए 90 ०% व्यक्तिहरूले उनीहरूको फाइलहरू कुनै पनि रूपमा Adobe क्लाउडमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। एडोब उनीहरूलाई कुनै मद्दत छैन, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले जवाफ नरहेका, समाधान नहुने टेक मुद्दाहरूको Adobe फोरमहरू र समर्थनमा।
तिनीहरूले यसलाई १० जीबी वा केहि सित्तै प्रस्ताव गर्नुपर्दछ, यी अनुप्रयोगहरू यस कारणका लागि विफलता हुन्, तपाईंको पैसा खर्च नगर्नुहोस्।
फेब्रुअरी १,, २०११ 5:१:2012 अपराह्न
@ google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f: disqus - त्यो जानकारी साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद! त्यो वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। म सोच्न थाल्छु कि Adobe ले पहिचान संकटको एक बिट गरिरहेको छ।